UPVC mgbidi panel T1110 - China Hubei Shengyu Building Materials
Shengyu UPVC mgbidi panelt bụ a ọhụrụ nhọrọ n'ihi na mgbidi cladding ewu. Ọ na-arụpụtara site 3 oyi akwa co-extrusion technology. Ọ bụ siri ike, inogide na agba na fechaa, mma karịa metal na galvanized mpempe akwụkwọ. More mkpa, ọ ga-ajari dị arọ ụlọ ọrụ ogige. Anyị UPVC mgbidi panel bụ eguzogide asịd, dịkwa ka usoro ha na iru mmiri na a ma ama na mma. Ọ na-anọgide ufọk ufene ke anụ ahụ arụmọrụ nke -40ºC ka 80ºC. The mgbochi corrosion arụmọrụ nke UPVC mgbidi panel adabara kasị applic ...
FOB Price: 2.99-7.99 / square mita
Shengyu UPVC mgbidi panelt bụ a ọhụrụ nhọrọ n'ihi na mgbidi cladding ewu. Ọ na-arụpụtara site 3 oyi akwa co-extrusion technology. Ọ bụ siri ike, inogide na agba na fechaa, mma karịa metal na galvanized mpempe akwụkwọ. More mkpa, ọ ga-ajari dị arọ ụlọ ọrụ ogige.
Anyị UPVC mgbidi panel bụ eguzogide asịd, dịkwa ka usoro ha na iru mmiri na a ma ama na mma. Ọ na-anọgide ufọk ufene ke anụ ahụ arụmọrụ nke -40ºC ka 80ºC.
The mgbochi corrosion arụmọrụ nke UPVC mgbidi panel adabara kasị ngwa ke ala gbara osimiri okirikiri ebe oké nnu foogu corrosion, na ebe oké ikuku ndu, karịsịa na chemical ulo oru na mpaghara.
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 1110mm 1050mm 800mm ka choro 3.2-6.0KG / ㎡ kenkowaputa White, Blue
Next: FRP daylighting mpempe akwụkwọ TT980
Clear ịkwanyere roofing Panel
Fiber ụlọ ogwe
faiba glaasi griin haus ogwe
faiba glaasi mkpuchi ogwe
Faiba glaasi Light ogwe
faiba glaasi Plastic ogwe
faiba glaasi ụlọ ogwe
Frp gwara mmanụ ogwe
Frp ogwe N'ihi Sale
Frp mgbidi ogwe
Glass ụlọ ogwe Prices
griin haus Plastic ogwe
griin haus ụlọ ogwe
Gwara mmanụ n'elu ụlọ ogwe
Opaque faiba glaasi ogwe
Plastic ụlọ ogwe
ịkwanyere ụlọ ogwe
Translucent corrugated ụlọ ogwe
translucent faiba glaasi ụlọ ogwe
Uzo faiba glaasi roofing ogwe
Uzo ụlọ ogwe